Google adịgboroja URL Shortener Statistics
Anyị na ndị ahịa nwere nnọkọ na-akpali akpali nchịkọta ọzụzụ na ndụmọdụ anyị na ụlọ ọrụ nne na nna ha na-eme. Dịka akụkụ nke mbọ ha na-aga n'ihu, ha na-ekesa Koodu QR, tinye koodu mkpọsa Google Analytics, wee tinye ya Google URL dị mkpụmkpụ, na-ekwe ka ha n'ụzọ ziri ezi tụọ usoro nzaghachi nke mbọ ha.
Nke a bụ atụmatụ siri ike. Nanị nchịkọta enweghị ike inye gị ihe niile ịchọrọ maka ngwa niile na-ekesa njikọ n'oge a anaghị agbakwunye data na arịrịọ ahụ. Nchịkọta maara ebe ị si site na sava weebụ na-agwa ibe na-esote ebe peeji ikpeazụ dị yana ozi niile dị na onye ahịa ahụ. Ebe ọ bụ na ngwa ọdịnala enweghị sava weebụ… ha anaghị agafe data. N'ihi ya, ị ga-achọ itinye koodu mkpọsa na URL gị dị mkpụmkpụ tupu ikesa ha. Anyị gosipụtara ka esi etinye Google Analytics mkpọsa koodu nsuso naHootsuite na nso nso a.
Otú ọ dị, ọ chọpụtara ihe dị egwu karị… ọ chọpụtara na Google nwere clicks na-eme tupu e kee njikọ ahụ! Nke a bụ ihe akaebe - na igwe nyocha akụkọ Goo.gl:
Ma nke ahụ emeghị otu mgbe… ọ bụ ebe niile!
Ọ bụ ihe nwute na data a enweghị ike ịdabere na ya… mana ọ nweghị ike ịbụ. Site na ntanetị, ịnweghị ike ịhọrọ akara ụbọchị, yabụ Kevin ga-eji aka ya dọrọ oke ya na chaatị ndị ahụ iji weghara ụbọchị na pịa iji mejupụta mkpesa ya. O juru m anya na Google anaghị etinye naanị mkpụmkpụ ha na nchịkọta ha ma debanye aha mkpọsa ahụ na akpaghị aka. Ọ na-eju m anya karịa, n'oge a ebe anyị kwesịrị ịchọpụta arụmọrụ saịtị anyị, lee ka njehie a si bụrụ nzuzu!
Onye ọ bụla maara onye njikwa ngwaahịa na Goo.gl nke nwere ike ịkọwa nke a?
Tags: goo.glgoogle url shortenerakukourl shortener
MindMapping na Njikọ Aka maka Enterprise
Mee 1, 2016 na 5: 35 PM
Enwere m otu nsogbu ahụ mgbe m gbalịrị ịlele mmetụta nke ọwa ụfọdụ. Anọ m na-elele isiokwu ndị ahụ site na otu Google na forums na blọọgụ ndị ọzọ mana ahụghị m ihe ọ bụla bara uru.